Ngabe i-Medicare ihlanganisa imishanguzo yama-shingles? | Ukuhlolwa - Imininingwane Yezidakamizwa | Julayi 2021
Ukuphila Kahle Inkampani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Ukuphuma Izidakamizwa Vs. Umngani Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani, The Checkout Izindaba, Wellness Umphakathi Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Ngabe i-Medicare iyayimboza iShingrix?
Ngabe i-Medicare iyayimboza iShingrix?
I-Shingles (i-herpes zoster) ukutheleleka ngegciwane okubangelwa igciwane i-varicella-zoster. Ikhiqiza ukuqubuka okubuhlungu ngamabhaladi futhi ngokujwayelekile kuvela kolunye uhlangothi lomzimba. Igciwane elifanayo elibanga ingxibongo yikhona okubangela ama-shingles. Noma ngubani owake waba nengxibongo yenkukhu esikhathini esedlule usengozini yokuthola ama-shingles. Ama-shingles angaba buhlungu kepha avinjelwe ngokugoma.
Izikhungo Zokulawulwa Nokuvimbelwa Kwezifo (CDC) zincoma lokho abantu abadala abangaphezu kweminyaka engama-50 thola umuthi wokugomela amashoba. Ama-shingles angadala ubuhlungu besikhathi eside (i-postherpetic neuralgia) nomonakalo wezinzwa. Ukuthola umuthi wokugomela ama-shingles kanye, futhi futhi ezinyangeni ezimbili kuya kweziyisithupha kamuva kufakazelwe ukuthi kusebenza kakhulu ekuvikeleni ama-shingles. Shingrix umuthi wokugoma we-shingles owaziwa kakhulu; I-Zostavax enye inketho etholakalayo.
ukwehlisa kanjani umfutho wegazi ekhaya
Imuphi umuthi wokugoma ongcono kakhulu kuma-shingles?
Ama-shingles angadala ukuqhuma okubuhlungu ngamabhamuza, kanti abanye abantu baze baphathwe yikhanda, ukugodola, umkhuhlane kanye nesisu esibuhlungu. Abantu abaningi bangase bangacabangi ukuthi bazothola ama-shingles, kepha kungadala ukulimala okuhlala isikhathi eside futhi kubuhlungu kakhulu ukuzwa. Indlela engcono yokugwema lezi zimpawu ukuthola umuthi wokugomela ushingles. Noma ngabe uke waba nama-shingles phambilini, ukugoma kungasiza ekunciphiseni amathuba akho okukuthola futhi.
I-Zostavax kwakuwumuthi wokugoma wokuqala we-shingles onikezwe ilayisensi yi-FDA ku 2006 . Ungumuthi wokugoma obukhoma, okusho ukuthi awulungele abantu abangakwazi ukuthola imigomo ebukhoma, njengaleyo enezinkinga zokuzilimaza komzimba.
Le mikhawulo ayisebenzi kuShingrix, ngoba akuyona umuthi wokugoma obukhoma. I-Shingrix nayo ibonakalise ukuthi isebenza kangcono kune-Zostavax, njengoba ihlanganisa izinhlobo eziningi zegciwane, kepha ikhetha ISringrix ngaphezulu kweZostavax kuzosho ukuthola amashothi amabili esikhundleni sowodwa.
Yomibili le mithi yokugoma ivikela kuma-shingles okungenani iminyaka emihlanu, yize iShingrix ingahlala isikhashana. Ukukhuluma nodokotela wakho kuyindlela engcono yokunquma ukuthi imuphi umuthi wokugomela i-shingles ongakhetha kahle kuwo.
Ngabe i-Medicare ihlanganisa imishanguzo yama-shingles?
Izinkampani eziningi zomshuwalense wezempilo zimboza imishanguzo yama-shingles, kepha ukumbozwa okuzimele kweMedicare ngeke kuhlanganise imigomo. Kufanele ubhalise ohlelweni lwezidakamizwa i-Medicare Part D ukuze ube nokutholakala kwezidakamizwa kadokotela okubandakanya imigomo ye-shingles. Uhlelo lwe-Medicare Part A (uhlelo lomshuwalense wesibhedlela) noma uhlelo lwe-Medicare Part B (umshwalense wezokwelapha), izingxenye ze-Medicare yasekuqaleni, ngeke zikunikeze inani elifanele lokumbozwa.
Ungabhalisela uhlelo lwemithi kadokotela uqobo lweMedicare Part D, noma ubhalise kuhlelo lweMedicare Advantage olubandakanya ukumbozwa kwengxenye D. Noma yikuphi kwalokhu okukhethwa kukho kuzohlanganisa i-Shingrix ne-Zostavax, imigomo emibili ye-shingles emakethe.
Njalo uhlelo lweMedicare Part D lwehlukile futhi luzohlinzeka ngamazinga ahlukahlukene wokutholakala kwemithi yokugomela i-shingles. Amanye amapulani angaba nokufakwa okungcono ngama-copayments aphansi, kanti amanye angaba nokutholakala okubi kakhulu ngama-copay aphezulu. Kungenzeka futhi ukuthi ube ne-deductible, copay, noma i-coinsurance.
Izindlela ezahlukahlukene zeMedicare Part D zihlela imishanguzo nokugoma kube yizigaba ezihlukene. Ukuthi uhlelo lwakho lufaka imigomo ye-shingles kuzonquma i-copay yakho. Indlela engcono yokunquma ukuthi yiluphi uhlelo lomshuwalense olungcono kakhulu kuwe ukukhuluma nomeluleki wezinsizakalo zeMedicare.
I-Medicare.gov futhi kuyinsiza ewusizo yokuqhathanisa izinhlelo zemithi kadokotela, ukusesha abahlinzeki nezinsiza, kanye nokulinganisa izindleko ezingaba khona. Abasebenzisi be-TTY bangashayela u-877-486-2048 ukukhuluma nommeleli weMedare.
Imiphi imishanguzo i-Medicare ehlanganisa?
I-Medicare ihlanganisa imijovo ehlukahlukene. Ngenkathi iMedicare Part B yaziwa ngokujwayelekile ukumboza imigomo eminingi, Ingxenye D imboza kakhulu noma yimiphi imithi yokugoma engasebenzi uhlelo lweNgxenye B. Nalu itafula lokusiza ukucacisa ukuthi yimiphi imigomo embozwe uhlelo ngalunye:
Ingxenye yeMedare B Ingxenye yeMedare D
Imishanguzo ye-Hepatitis B Imishanguzo ye-MMR
Imithi yokugomela igciwane lomkhuhlane Imishanguzo ye-Tdap
Imishanguzo ye-pneumococcal pneumonia Imishanguzo yamaShingles
Imigomo ehlobene nokwelapha ukulimala noma ukuvezwa yisifo Yonke eminye imishanguzo etholakalayo ezentengiselwano engamboziwe yiMedicare Part B
Ukuze ufunde ukuthi uhlelo lwakho lwe-Medicare luhlanganisa noma cha umuthi wokugoma owudingayo, kufanele uhlole ifomula yohlelo lwakho. I-formulary uhlu lwayo yonke imishanguzo kadokotela ehlanganiswa nohlelo lwakho nokuthi ingakubiza malini. Shayela inkampani yakho yomshuwalense noma i-ejensi yomshuwalense ukuze ufunde kabanzi mayelana nefomula yohlelo lwakho oluthile.
Ubiza malini umuthi wokugomela ama-shingles?
Imishanguzo yama-shingles ingabiza kakhulu, ibize kuze kufike ku- $ 300 ngomthamo ngamunye. Ukuba nomshuwalense kungalahla intengo yomuthi wokugomela ama-shingles, kepha amanani azoxhomeka kumphathi womshuwalense nakunoma ikuphi ukudonswa kwemali, ama-copay noma i-coinsurance Nalu itafula lokusiza ukuqhathanisa izindleko ze-Shingrix ne-Zostavax, imishanguzo emibili ye-shingles etholakalayo ukuthengwa:
Intengo yokuthengisa (ngaphandle komshwalense) $ 181.99 $ 278.00
Kumbozwe umshwalense? Yebo Yebo
Kumbozwe yi-Medicare yasekuqaleni? Akunjalo Akunjalo
Ikhuphoni le-SingleCare Thola Ikhuphoni Lapha Thola Ikhuphoni Lapha
Kungani umuthi wokugomela ushingles ubiza kangaka?
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuletha imishanguzo emakethe kungabiza u- $ 1 billion futhi kuthathe amashumi eminyaka ukuthuthukisa, u-Amesh Adalja, MD, udokotela wezifo ezithathelwanayo oqinisekiswe yibhodi kanye nesazi esiphakeme Isikhungo sikaJohn Hopkins Sokuphepha Kwezempilo . Umthwalo wamashingles kanye nemiphumela yawo ngemuva kukhulu, ngakho-ke kubalulekile ukuthi izinkampani ezimbalwa ezenza lo mgomo zibe nezikhuthazo zemakethe zokuqhubeka nokwenza imishanguzo yokugoma. Isidingo seShingrix siphezulu kakhulu, nokushoda kwenzeka, ngakho-ke intengo ibingeyona isithiyo ekuthathweni kwayo.
Ukubhalisa kuhlelo oluhlanganisa imigomo ye-shingles kuyindlela engcono yokonga imali. Izingxenye ze-Medicare A (Umshwalense Wesibhedlela) noma i-B (Umshuwalense Wezokwelapha) azihlanganisi imigomo ye-shingles, kepha izinhlelo ze-Medicare Part D ziyakwenza. Inani lokumbozwa, i-copay, ne-deductibles okuzodingeka ukuthi umuntu akhokhe njengengxenye yohlelo lwe-Medicare Part D luyahlukahluka. Ngaphandle komshuwalense wezempilo, abantu abaningi kungenzeka bangakwazi ukukhokhela imishanguzo yabo ye-shingles.
Ungawuthola kanjani umuthi wokugoma we-shingles ohlanganiswe yi-Medicare
Lapho usuvele unecebo lomshuwalense elihlanganisa imigomo yama-shingles, ukuyithenga isinyathelo esilandelayo. Amakhemisi amaningi ahlinzeka ngemithi yokugoma enza kanjalo ngaphansi kokuma kukadokotela owengamele. Lokhu kulula ezigulini ngoba kuyazigcinela uhambo oluya ehhovisi likadokotela ukuze zithole incwadi kadokotela yokugoma kuqala.
ungazelapha kanjani izifo ezithinta imvubelo
Khumbula, ikhemisi kuphela elingakhokhisa i-Medicare Part D ngomgomo wakho futhi likunikeze ukumbozwa okuhle kakhulu, ngakho-ke ukuze uthole intengo engcono kakhulu, uzofuna ukuthola umuthi wakho wokugoma ekhemisi. Uma ikhemisi lakho olikhethayo lingenawo ama-oda wokuma womuthi wokugomela oshaka, lapho-ke uzofuna ukuvakashela udokotela wakho kuqala ukuthola incwadi kadokotela.
Kungenzeka ukuthi wonge imali emithini yokugomela i-shingles enekhadi lokonga le-SingleCare ekhemisi. AbakwaSingleCare bangasiza iziguli ezingavikelekile noma ezingakatholakali kahle ukuthola imishanguzo yama-shingles ngentengo enesaphulelo.
Izimpawu zokuqala eziyi-10 zesifo sikashukela nokuthi uzobona nini umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo
yini ongayisebenzisa uma iguliswa i-neosporin
enzani ama-probiotic kumathumbu akho
iliphi ikhambi lasekhaya elihle kakhulu lokuqunjelwa
nexplanon kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza
ukudla okuhle ongakudla uma ugula
umuthi ongawuphuzela isicanucanu ngenkathi ukhulelwe